La Yaabk Aduunka: 65 sano jir 37 sano aan qubaysan maxay tahay sababtu? + sawiro – SBC
La Yaabk Aduunka: 65 sano jir 37 sano aan qubaysan maxay tahay sababtu? + sawiro
Wuxuu aaminsan yahay in qubeys la’aantu ay tahay hidaayo xag ALLE uga timid & amar la faray, waayo wuxuu nidir ku marey inaanu korkiisa biyo taabsan oo aanu qubaysan, ilaa ka helo wiil waayo wuxuu leeyahay 7 gabdhood, waana caado & dhaqan diin la’aan ah in dalka Hindiya laga aamino gabdhaha wax balaayo ah oo ibtilo ah oo hadii ILAAH ku siiyo aad oohin la dhacayso.
Kailash Singh 65 sano jir ah mudo 37 ah ma aanu qubaysan, timihiisana ha ahaan gar ama kuwa madaxa maqas uu ku jiro iska daayee biyo & saliid ma taabsiin, shaambana warkeedaba daa.
Sanadkii 1974-kii oo aheyd markii uu aroosay kaba soo qaad habeenkii arooskiisa ayaa ugu dambeysay biyo jirkiisa uu mariyo waxaana uu noqdey ninka aduunka ugu qarmoon, garkiisa oo gaaraya 6 feet ama cagood wuxuu isku noqdey mid isku malaasmay oo wasaqda & usgagii ayaa inta ka badatey wuxuu isku noqdey gees isku dhexbaxay.
Inkastoo dadka dariska lah ninkaasi beeraleyda ah ay aad ugu qoslaan isla markanaa sanka sacabka ama marada ka saartaan hadii uu ku soo dhawaado waayo wasaqda & usgagiisa ayaa hadii uu ku soo agmaro la saaqmaysaa, waxaase arintaasi mudo sanooyin u soo dulqaadanaysay xaaskiisa Kalavati Devi oo 65 sano jir ah, inkastoo ay haatan ka soo xamilgabayso u sii dulqaadashada shiirka & qurmooyinka saygeeda, waxanaa dhawaan ay ku hanjabtey inaanay la seexan doonin hadii aanu ku bilaabin in uu jirkiisa mayro oo uu qubaysto.
Mr Singh wuxuu waqtigiisa inta badan ku qaataa ku dhex jirka teendho aad u kulul oo heer kulkeedu gaarayo 47 degree, waxaana halkaasi uu si ba’an ugu ruugaa oo uu ku cabaa maandooriyaha loo yaqaan marijuana, isagoo halkaasi wax loogu yeeray salaada Hinduuga ku tukumada, waxaa kaloo kaligiis halkaasi ku ciyaara qoob ka ciyaar.
Gabdhihiisa oo kala ah Baby Singh oo 35 sano jir ah, Neetu Singh oo 25 sano jir ah, Pooja Singh oo 16 sano jir ah oo ka mid ah 7-da gabdhood ee uu dhaley kuma qasbaan Aabahooda ma qubeysta ah inay ku cadaadiyaan in uu qubeyso waxaana ay sheegaan in uu u leeyahay xaq in uu ku adkeysto hab dhaqankiisan diiniga ah. “Hadii aan isku dayno inaan ku cadaadino in uu qubeysto, wuu nala dagaalamaya, oo wuu naga cararayaa, waxaan isku daynay tiro ka dhawr jeer inaan ku qasabno in uu qubaysto, isla markaana uu garka iska jaro, laakiin xaaladaasi waxay noqotaa hal bacaad lagu lisay” sidaasi waxaa tiri xaaskiisa Kalavati. “Wuxuu dhahaa waxaan ka xigaa inaan dhinto intii aan qubeysan lahaa, wiil kaliya inaan dhalo ayaa iga xigta waxaasi oo dhan iyo inaan badalo maskaxdeyda, waana wax aan waligey ku soo jirey oo aan ku dhaqmayey” ayuu tiri ma qubeyste Kailash Singh. Mr. Singh wuxuu degan yahay tuulada Chatav oo ka trisan magaalada Varanasi oo ah magaalo u barakaysan dadka Hinduuga oo ay wabiyada isku tuuraan iyagoo ku andacoonaya inay ku tukunayaan oo ay waxa ay Ilaayada ugu yeeraan ku baryayaan. “Ciyaalku waxay igu caayaan ama igu qayliyaan inaanan qubeysan marka aan magaalada dhexdeeda ku wato baaskiilkeyga, waxaa jira dad fara badan oo dabeecado xun leh kuwaasi oo intaasi igu caynaya inaanan qubaysan, laakiin dan iyo heelo kama lihi waayo maba fahamsana go’aankeyga, laakiin maxay sheegayaan waligey badali maayo go’aankeyga waayo waa arin rabbi” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Kailash Singh.